၂၀၁၅ | 2015 ၏စာမျက်နှာ2| NAB သတင်းများ | 404 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 (စာမျက်နှာ 2)
UNC-Chapel Hill တည်နေရာ: Chapel Hill NC US students? studio ကျောင်းသားများကိုစတူဒီယိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများကိုသင့်လျော်စွာလည်ပတ်ရန်အသံလွှင့်ခလုတ်၊ အသံဘုတ်၊ ဂရပ်ဖစ်များအပါအ ၀ င်သင်ကြားပေးခြင်း။
ej4 တည်နေရာ - Kansas City MO US အဆင့်မြင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းစွမ်းရည် ကျွန်ုပ်တို့၏စတူဒီယိုများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပရိုဂရမ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုရန်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။ နောက်ထပ် >>
BVS Performance Solutions တည်နေရာ - Cedar Rapids IA US အနည်းဆုံးလေးနှစ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံလိုအပ်သည်။ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဘွဲ့နှင့်အတူ…နောက်ထပ် >>
Purdue University Location : West Lafayette IN US Interns in video production, engineering assistance and video philosophy. Knowledge of video signals and systems, FCC broadcast standards, professional video… More >>
2 ၏စာမျက်နှာ 404«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»